1 Paulo ne Silwano+ ne Timoteo+ de kɔma Tesalonikafo asafo wɔ Onyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo mu:+ Adom ne asomdwoe nka mo.+ 2 Yɛkae mo nyinaa wɔ yɛn mpaebɔ mu na yɛda Onyankopɔn ase daa,+ 3 na daa yɛkae adwuma+ a mode gyidi yɛ, ne adwumaden a mufi ɔdɔ mu yɛ ne boasetɔ a yɛn Awurade Yesu Kristo mu anidaso+ nti, moda no adi no wɔ yɛn Nyankopɔn ne Agya no anim. 4 Anuanom a Onyankopɔn dɔ mo, yenim sɛ wapaw mo,+ 5 efisɛ asɛmpa a yɛka no amma mo nkyɛn ɔkasa mu nko, na mmom ɛbae tumi+ ne honhom kronkron ne awerɛhyem a emu yɛ den mu nso,+ sɛnea mo nti yɛyɛɛ yɛn ade fae+ a munim dedaw no; 6 na musuasuaa+ yɛne Awurade,+ efisɛ mode honhom kronkron anigye+ gyee asɛm no ahohia+ pii mu, 7 enti moayɛ nhwɛso ama gyidifo a wɔwɔ Makedonia ne Akaia no nyinaa. 8 Nokwasɛm ne sɛ, ɛnyɛ sɛ Yehowa asɛm+ no fi mo hɔ atrɛw wɔ Makedonia ne Akaia nko, na mmom Onyankopɔn mu gyidi+ a mowɔ no atrɛw adu mmaa nyinaa,+ ma enti enhia sɛ yɛka asɛm biara. 9 Na wɔn ankasa ka ɔkwan a yɛfaa so baa mo nkyɛn no ho asɛm, ne sɛnea modan fii mo ahoni+ ho baa Onyankopɔn nkyɛn sɛ morebɛsom Onyankopɔn teasefo+ ne ɔnokwafo+ no; 10 mobaa ne nkyɛn sɛ morebɛtwɛn+ ne Ba a onyan no fii awufo mu+ no afi soro,+ Yesu a ɔregye yɛn afi abufuw a ɛreba no mu no.+